Overview rehetra Downloads Fampidinana farany Fampidinana malaza - SCENERY - - Fitantanana ny tany - - Frantsa - fiaramanidina - - fiaramanidina (isan-karazany) - - Airbus - - Fiaramanidina taloha - - Mpiady - - Cessna - - Gliders - - Zlin Aviation - Fitaovana - AIRCRAFT - - fiaramanidina (isan-karazany) - - Airbus - - Boeing - - Whole fleet of aircraft - - Old fiaramanidina - - Fighter - - Antonov - - Tupolev - - Socata - - Hawker Beechcraft - - McDonnell Douglas - - Bombardier Aéronautique - - Seaplane - - Lockheed Martin - - Patrouille de France - - De Havilland - - Embraer - - Cessna - - North American Aviation - - Gliders - - Britten-Norman - - ATR - - Grumman - - Pilatus - - Frantsay Vokovoko Mena - - Lockheed - HELIKOPTER - - Various angidimby - - Eurocopter - - Bell Aircraft Corporation - - Piasecki PHC - - Sikorsky - - Aerospatiale - SCENERY - - Airport - VARIOUS - - Projects, prototypes - - Fanovana - Tools - Paywares Flight simulator 2004 - AIRCRAFT - - Aircraft (Uncategorized) - - Airbus - - Boeing - - Ny sambo manontolo manontolo an'i Frantsa - - Patrouille de France - - North American Aviation - - De Havilland - - Hawker Beechcraft - - Embraer - - Seaplane - - Old fiaramanidina - - Bombardier Aéronautique - - Cessna - - Rosiana mpiady - - French mpiady - - Various mpiady - - Antonov - - ATR - - Gliders - - Britten-Norman - - Tupolev - - Frantsay Vokovoko Mena - - Lockheed - - Pilatus - - Lockheed Martin - HELIKOPTER - - Hélicoptères (divers) - - Eurocopter - - Bell Aircraft Corporation - - Sikorsky - - Aerospatiale - SCENERY - - Various toerana tsara tarehy - VARIOUS - - Fanovana - - Projects, prototypes X-Plane 10 - X-Plane 10 fiaramanidina - - Fighter - - Various fiaramanidina - angidimby - - Various - Various Special Puzzles Free - X-Plane 9 fiaramanidina - - Airbus - - Old fiaramanidina - - Various fiaramanidina - angidimby
Ny fisintomana rehetra ho an'ny Flight Simulator 2004 - Boeing
21 311 4.57 (7)
Noforonina 6 Oct 2015
Nohavaozina taminy 5 Oct 2015
Modely tena tsara an'ny Boeing 787-8 naroson'ny TDS (Tenkuu Developers Studio) ho an'ny FS2004, tokony hanidina izany ianao add-on avy amin'ny tontonana 2D (tsy misy VC)
Nosoratan'i TDS (Tenkuu Developers Studio)
Posky Boeing 757-200 V1 Mpanao fihetsiketsehana FS2004
24 141 3.56 (18)
Noforonina 14 Dec 2011
Nohavaozina taminy 6 Aug 2012
Complete Boeing 757-200 nanao ny avo lenta ho an'ny FS2004 dikan Mpanao fihetsiketsehana, tonga lafatra noho ny fandraisana anjara amin'ny metting sy ny rivotra mampiseho.
Nosoratan'i POSKY & Wilhelm Hudetz
Vonona Fa Pushback Boeing 747-200v2 FS2004
40 689 4.09 (53)
Noforonina 2 Jun 2010
Vonona ny Pushback Version V2 no mandroso indrindra freeware Classic B747 simulator azo amin'izao fotoana izao ho an'ny Microsoft Flight simulator 2004.
Nosoratan'i Vmax Flight Systems, Inc. Ralph's Panel Shop sy Ralph L. Tofflemire
15 840 4.61 (23)
Noforonina 17 Mar 2009
Zava-mahatalanjona mahagaga! Asa goavana be izy io, mahatalanjona ny antsipirihan'ny maso. Ity kitapo ity dia ahitana sehatra manokana avy amin'i Ken Mitchel sy feo mahazatra.
Nosoratan'i Project Open Sky + Ken Mitchell
41 233 4.18 (22)
Noforonina 25 Nov 2007
Nohavaozina taminy 31 Jul 2013
Ity ny zava-manahirana malaza iFly Boeing 747-400 momba ny kalitao avo indrindra. Tokony hisaotra ny mpanoratra an'io isika add-on. Ny 747 dia miaraka amin'ny andian-dahatsoratra 8 azo jerena
Nosoratan'i Jiangwei Shen, loko: Bo Yuan
19 943 4.36 (11)
Noforonina 16 Jul 2006
Ity ny B52, malaza na dia eo aza ny tenany, mampalahelo! Dikan-teny maromaro mety. Tsy fantatra ny mpanoratra. Ny modely fiaramanidina tena tsara. Nohitsin'i Roger ireo feo ireo.
20 314 4.00 (7)
Noforonina 1 Jun 2006
Nohavaozina taminy 3 Jun 2014
Ny fiaramanidina modely amin'ny kalitaon'ny sidina kalitao sy tonga lafatra Tonga amin'ny repaint iray. Ny feony dia kalitao tsy manam-paharoa! Misaotra ireo mpanoratra ny amin’izany add-on.
Nosoratan'i Chuck Grimes, Rok Dolenec, Arne Bartels, Jean-Pier
Boeing 707-200 Antananarivo Air Madagascar FS2004
21 117 3.10 (10)
Noforonina 30 Mar 2006
Fiaramanidina avy amin'ny andiany Boeing. Manana loko iray izy io. Tsotra ary mandeha tsara. Tsara kalitao ny feo
Nosoratan'i Gary Carlson
27 631 4.21 (14)
Noforonina 4 Jan 2006
Ankafizo io vatosoa! Tsy nahita tsara kokoa. Toy ny tena Boeing 767-400. Tsipiriany rehetra ireo ankehitriny. Ny tontonana Tena tsara tarehy sy ny asany. Ny feo dia tena zava-misy ary tena tonga avy amin'io fiaramanidina.
Avy amin'i Model et textures ProjectOpen Sky, Sons de Warren
21 925 3.50 (14)
Noforonina 26 Dec 2005
Mahafinaritra taranaka vaovao fiaramanidina (mifototra amin'ny tany am-boalohany fanampiny FS2004 amin'ny fanatsarana). Textures amin'ny vy fisaintsainana, virtoaly cockpit, tanteraka ary tena tsara tontonana Stereo feo.
Nosoratan'i Mario Coelho
767-300ER Boeing Air France FS2004
23 899 3.86 (7)
Noforonina 15 Nov 2005
Toy ny mahazatra, ny asa tsara nataon'ny ekipa IFDG. Ny modely dia tsara tarehy, ny feo dia tena zava-misy sy ny tontonana toa miasa tanteraka.
Nosoratan'i Equipe IFDG ...
10 659 4.29 (7)
Noforonina 5 Nov 2005
Indray ny tena tsara kalitao miavaka fiaramanidina ho an'ny freeware. Nandritra ny fametrahana, dia afaka misafidy ny dikan-teny roa na ny fametrahana dika "komandy" amin'ny tontonana ho amin'ny ankavia, na ny dikan-"mpiara-mpanamory fiaramanidina" miaraka amin'ny tontonana ho amin'ny tsara.
Nosoratan'i Project Opensky
19 312 3.71 (7)
Ity misy kinova 747 Cargo miaraka amina sary-tena misy sary. Tena tsara tarehy izy io, mitovy amin'ny tena izy. Tena mahomby ny tontonana sy ny feo.
37 092 4.53 (34)
Noforonina 30 Oct 2005
Boeing 737-800 Air Scheffel no tsara atao dikan izay za-draharaha tsara ho an'ny mpampiasa. Eny tokoa, ny tontonana dia ny lehibe realism. Izany dia tanteraka asany araka ny hitanao amin'ny sary.
Nosoratan'i Arjan Scheffel, Eric Cantu de Flight-FX
16 859 4.33 (6)
Noforonina 26 Oct 2005
Boeing 767 400 World Tour dia fiaramanidina ny toetra miavaka! Ny modely ivelany dia tena ambony dia ambony. Isika manaiky ny asa tsara ny ekipa IFDG.
Nosoratan'i MODEL de ALBERT BOUWMAN, TEXTURES de BEN JONES
Boeing 737-700 traikefa Continental Airlines FS2004
26 946 3.82 (11)
Nohavaozina taminy 8 Aug 2012
Continental Airlines Boeing 737-700. Ity fiaramanidina ity dia tena mahomby amin'ny fomba kisary, ary koa ny sakamalaho virtoaly. Amin'ny ankapobeny, kalitao avo lenta izany add-on. Mifalia!
15 776 4.75 (4)
Ny mahafinaritra high quality fiaramanidina amin'ny zava-misy cockpit sy mahatahotra feo! Ny fiaramanidina ihany koa modely tsara atao. Afaka mahatoky ianao fa ny fiaramanidina dia mavesatra sy ny lehibe, sarotra, mba hahatonga. Tandremo sao tsy mahita!
Nosoratan'i Equipe POSKY et Jouvarn Gultom
21 075 4.08 (13)
High quality fiaramanidina manokana metaly Sheen ny fuselage. Functional sy tsara 2D tontonana, izany koa ny alina textures. Fitaovana rehetra no asany.
Nosoratan'i Brian C. Selb
13 573 4.25 (8)
Modely tsara tarehy amin'ny lokon'ny fankalazana ny faha-25 taonan'ny orinasa American Trans Air (ATA) amin'ity add-on dia ampiarahina amin'ny feo mandeha manokana, tsipika marolafy virtoaly ary tontonana 2D tsara tarehy.
Nosoratan'i Projet OpenSky
Fampidinana: Pejy 1 amin'ny 2 Valiny 1 - 19 amin'ny 22